तपाईंको कर्पोरेट भिडियोहरूले किन मार्क मिस गरे, र यसको बारेमा के गर्नुपर्छ Martech Zone
शुक्रबार, मार्च 26, 2021 शुक्रबार, मार्च 26, 2021 आशा मोर्ले
हामी सबैलाई थाहा छ कसैको अर्थ के हो "कर्पोरेट भिडियो"। सिद्धान्तमा, यो शब्द कर्पोरेसनले बनेको कुनै पनि भिडियोमा लागू गर्दछ। यो एक तटस्थ वर्णनकर्ता हुन प्रयोग गर्‍यो, तर यो अब छैन। आजका दिनहरू, B2B मार्केटिंगमा हामी धेरैले भन्छौं कर्पोरेट भिडियो एक sneer को एक बिट संग।
त्यो किनभने कर्पोरेट भिडियो ब्ल्याण्ड हो। कर्पोरेट भिडियो अत्यधिक आकर्षक सहकर्मीहरूको स्टक फुटेज बाट बनेको छ सहकार्य गर्दै सम्मेलन कोठामा। कर्पोरेट भिडियोले एक पसिना सीईओ बुलेट पोइन्टहरू पढेर टेलिप्रोमिटर बन्द गर्दछ। कर्पोरेट भिडियो एक कार्यक्रम रिक्याप हो जुन एक तालिकामा मानिसहरू तिनीहरूको नाम ब्याज फेला पार्न सुरू गर्दछ र ताली बजाउने दर्शकहरूको साथ समाप्त हुन्छ।
संक्षिप्तमा, कर्पोरेट भिडियो बोरिंग, अप्रभावी, र तपाईंको मार्केटिंग बजेटको अपशिष्ट हो।
निगमहरू बनाउन जारी राख्नु बर्बाद छैन कर्पोरेट भिडियोहरू। एक मार्केटरको रूपमा, तपाइँ भिडियोहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन आकर्षक, प्रभावकारी र वास्तविक परिणामहरू ल्याउँदछ।
तपाईंको यात्रा टाढाबाट सुरू गर्नका लागि तीन मुख्य चरणहरू छन् कर्पोरेट भिडियो र मा प्रभावकारी भिडियो मार्केटिंग:
रणनीतिबाट सुरू गर्नुहोस्।
रचनात्मक मा लगानी।
तपाईंको दर्शकलाई विश्वास गर्नुहोस्।
चरण १: रणनीतिबाट सुरू गर्नुहोस्
सबैभन्दा कर्पोरेट भिडियो योजना चार सरल शब्दहरूको साथ सुरू हुन्छ: हामीलाई एउटा भिडियो चाहिन्छ। परियोजना टोलीले शुरू गरिसकेको छ कि भिडियो के आवश्यक छ र अर्को चरणमा कुरा बनाउनु हो।
दुर्भाग्यवस, भिडियो उत्पादनमा सिधा जम्पिंगले सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण चरणहरू छोडिदिन्छ। कर्पोरेट भिडियोहरू स्पष्ट, समर्पित भिडियो रणनीतिको अभावबाट जन्मेका छन्। तपाईंको मार्केटि team टोली रणनीति र स्पष्ट उद्देश्य बिना नयाँ सामाजिक प्लेटफर्म वा कार्यक्रम प्रायोजनमा उफ्रिनेछैन, त्यसोभए भिडियो किन फरक छ?
उदाहरण: Umault - कर्पोरेट भिडियोमा फसेको
भिडियो उत्पादनमा डाइभ गर्नु अघि भिडियोको रणनीति मार्फत काम गर्न समय लिनुहोस्। एकदम कमसेकम, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ:
यस भिडियोको उद्देश्य के हो? यो तपाईंको ग्राहक यात्रामा कहाँ फिट हुन्छ? सबैभन्दा ठूलो गल्तीहरू जुन एकमा परिणत हुन्छ कर्पोरेट भिडियोले स्पष्टीकरण गरिरहेको छैन जहाँ भिडियो बिक्री फनेलमा अवतरण गर्दछ। भिडियो ग्राहक यात्रा को बिभिन्न चरणहरु मा फरक भूमिका खेल्छ। प्रारम्भिक चरणको भिडियोले दर्शकहरूलाई तपाईंको ब्रान्डको साथ जारी राख्नको लागि प्रेरित गर्न आवश्यक छ। ढिलो-चरण भिडियोले ग्राहकलाई विश्वास दिलाउनु पर्छ कि तिनीहरूले सही निर्णय लिइरहेका छन्। दुई लाईड मिलाउन प्रयास गर्दैaबेमेल गडबड.
यस भिडियोको लागि लक्षित दर्शकहरू को हुन्? यदि तपाईं सँग धेरै छ खरीदार व्यक्तिहरू, एकल भिडियोको साथ पुग्नको लागि केवल एउटा छनौट गर्न कोसिस गर्नुहोस्। सबैसँग कुरा गर्ने प्रयासले तपाईलाई कसैलाई नबोल्दछ। तपाइँ सँधै फरक फरक दर्शकहरूसँग बोल्न भिडियोको धेरै संस्करणहरू बनाउन सक्नुहुन्छ।
यो भिडियो कहाँ प्रयोग हुनेछ? के यो एक अवतरण पृष्ठ anchoring, चिसो ईमेल मा पठाइएको छ, बिक्री बैठकहरु खोल्दै? भिडियो एक ठूलो लगानी हो, र यो बुझिन्छ कि साझेदारहरू यसलाई सकेसम्म धेरै संदर्भहरूमा प्रयोग गर्न सक्षम हुन चाहन्छन। जे होस्, एक भिडियो मा भन्न को लागी र बिभिन्न कुराहरु गर्न को लागी गर्नु पर्छ सन्दर्भ यो प्रयोग हुनेछ। सोशल मिडियामा एक भिडियो छोटो, सीधा हुनुपर्दछ, र दर्शकहरूलाई स्क्रोल रोक्नको लागि बिन्दुको दायाँ सम्म पुग्नु पर्छ। एक अवतरण पृष्ठ भिडियो को चारै तिर हो एक सम्भाव्य चाहिने सम्पूर्ण विवरणहरू प्रदान गरेर।
बिभिन्न प्रयोगहरूको लागि भिडियोको बहु संस्करणहरू बनाउने विचार गर्नुहोस्। भिडियो सिर्जना गर्न सबैभन्दा ठूलो लागत ड्राइभर उत्पादन दिन (हरू) हो। अतिरिक्त समय खर्च गरीएको फरक संस्करण वा लक्षित कटडाउन तपाईको ठाउँबाट अतिरिक्त माइलेज प्राप्त गर्न लागत प्रभावी तरीका हो।
तपाईंको टोलीको साथ वा तपाईंको एजेन्सीको साथ तपाईंको रणनीति स्पष्ट पार्न समय निकाल्दा भिडियोले के भन्नु पर्छ र के गर्नुपर्दछ स्पष्ट पार्दछ। त्यो एक्लोले "कर्पोरेट" क्षेत्रबाट टाढाको सब भन्दा ठूलो चरण लिन्छ, किनकि तपाईं यो सुनिश्चित गर्नुहुनेछ कि भिडियोमा स्पष्ट सन्देश छ, लक्षित दर्शकहरू, र उद्देश्य।
चरण २: रचनात्मकमा लगानी गर्नुहोस्
सबैभन्दा कर्पोरेट भिडियोहरू उही थकित tropes लाई फेरि र फेरि रिशेज गर्दछ। तपाईंले कतिवटा भिडियोहरू देख्नुभयो जुन सूर्य माथि पृथ्वी माथि बढ्दै सुरु हुन्छ, र त्यसपछि व्यस्त छेडछाडलाई जुम्लाबाट पैदलयात्रीहरू पार गर्दै, संकेत गर्दै जडान? हो यी भिडियोहरू बनाउनको लागि सजिलो छ र निर्णय लिने श्रृंखला बेच्न सजिलो छ, किनकि तपाईं तिनीहरूको एक लाख उदाहरणहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँका सबै प्रतिस्पर्धीहरूले तिनीहरूलाई बनाएका छन्।
र वास्तवमा किन तिनीहरू प्रभावहीन छन्। यदि तपाइँका सबै प्रतिस्पर्धीहरूसँग एक समान शैलीमा भिडियो छ भने, तपाइँ कसरी आशा गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँकै हो भनेर सम्झने आशा गर्नुहोस्? यी भिडियोहरू हेरेको लगत्तै भुलिन्छन्। संभावनाहरूले उनीहरूको उचित लगतको अभ्यास गर्दैछन् र तपाईं र तपाईंको सबै प्रतिस्पर्धीहरूको अनुसन्धान गर्दैछ। यसको मतलब तपाइँको प्रतिस्पर्धा पछाडि तपाइँको भिडियो हेर्नु हो। तपाईंले एक भिडियो सिर्जना गर्नु आवश्यक छ जसले सम्भावनाले तपाईंलाई सम्झना गराउँछ।
यदि तपाईंले आफ्नो होमवर्क गर्नुभयो र व्यापक भिडियो रणनीति सिर्जना गर्नुभयो भने, तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको सन्देश पुग्न एक आकर्षक तरिकाको कल्पना हुन सक्छ। भिडियो रणनीतिको बारेमा महान कुरा यो हो रचनात्मक विकल्पहरूलाई कन्टेसनबाट हटाउँछ। उदाहरण को लागी, एक पटक तपाइँ उद्यम स्तर निगमहरु मा CIOs को लागी एक निर्णय चरण भिडियो बनाउन चाहानुहुन्छ, एक प्रशंसापत्र भिडियो बनाउन को लागी योजना बनाउन सक्नुहुन्छ तिनीहरू आश्वासन दिन्छ कि तिनीहरु राम्रो कम्पनीमा छन्। तपाइँ कुनै उत्पादन वाकथ्रु भिडियो वा एक प्रेरणादायक ब्रान्ड स्थान बनाउनको लागि कुनै पनि योजनाहरू हटाउन सक्नुहुन्छ। ती भिडियो ग्राहक सेवा मा पहिले राम्रो काम गर्दछ।
उदाहरण: डेलोइट - कमाण्ड सेन्टर
एक रचनात्मक विचार केहि क्रिस्टोफर नोलन-स्तर प्रतिभा हुनु हुँदैन। तपाइँ के गर्न चाहानुहुन्छ तपाइँको श्रोतालाई सिधा एक आकर्षक र अविस्मरणीय तरिकामा बोल्ने तरीका भेट्टाउनु हो।
रचनात्मक मा लगानी भिडियो को लागी विचार भन्दा पर जान्छ। एक मजबूत B2B मार्केटिंग भिडियो को एक आकर्षक स्क्रिप्ट र उत्पादन सुरु हुनुभन्दा अघि स्टोरीबोर्ड मार्फत स्पष्ट दर्शन राख्नु पर्छ। एक "कर्पोरेट" भिडियो प्राय: क) अप्रलिपि वा बी) कुराकानी पोइन्टहरूको सूची प्रतिलिपि गरी लिपि ढाँचामा टाँस्दछ।
तपाईंले वर्णन गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने कहानीमा निर्भर रहित, अनस्क्रिप्टेड भिडियोहरू शक्तिशाली हुन सक्छन्। यो एक प्रशंसापत्र वा भावनात्मक कथा को लागी महान काम गर्दछ। उत्पाद लन्च वा ब्रान्ड स्पटको लागि अनस्क्रिप्टेड यति ठूलो हुँदैन। जब एक भिडियो को लागी विचार हो साक्षात्कार सीईओ, त्यसोभए तपाईं रचनात्मकलाई सीईओ र भिडियो सम्पादकमा आउटसोर्स गर्दै हुनुहुन्छ जुन यो सँगै केहि चीजमा मिलाउन आवश्यक छ। यसले सामान्यतया लामो पोष्ट-उत्पादन समय र मिस पोइन्ट पोइन्टहरूतिर अग्रसर गर्दछ।
एक राम्रो प्रतिलिपि लेखकले भिडियो ढाँचामा तपाईंको कुरा गर्ने पोइन्ट्स अनुवाद गर्न चमत्कार गर्न सक्छ। भिडियो स्क्रिप्ट लेखन एक विशेष कौशल हो जुन सबै प्रतिलिपि अधिकारकर्ताहरूसँग हुँदैन। धेरैजसो प्रतिलिपि अधिकारकर्ताहरू परिभाषाबाट लेखनमा सामग्री अभिव्यक्त गर्न उत्कृष्ट हुन्छन्। तिनीहरू अडियो / दृश्य माध्यममा सामग्री अभिव्यक्त गर्न आवश्यक छैन। यदि तपाईंसँग तपाईंको मार्केटि team टोलीमा इन-हाउस प्रतिलिपि अधिकारकर्ताहरू छन् भने, तपाईंको भिडियोहरूको लागि विशेषज्ञ स्क्रिप्ट लेखकलाई संलग्न गर्नेबारे विचार गर्नुहोस्।
चरण:: तपाईको दर्शकलाई विश्वास गर्नुहोस्।
मैले संस्करण सुनेको पटकको गन्ती हराएको छु:
हामी CIO हरूलाई बेचेका छौं। हामी शाब्दिक हुनु पर्छ वा तिनीहरूले प्राप्त गर्दैनन्।
मलाईं माफ गर्नुहोस्? तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रमुख निगमहरूको CIO हरूलाई तिनीहरूको लागि सबै कुराको आवश्यक छ? अर्को, तपाईं भन्न गइरहनु भएको छ कि व्यक्ति पजल वा रहस्य उपन्यासहरू मनपर्दैन।
तपाईंको दर्शकलाई विश्वास गर्नु भनेको उनीहरू चलाख हो भनेर विश्वास गर्नु हो। कि तिनीहरू आफ्नो काममा राम्रो छन्। कि तिनीहरू मनोरन्जन गर्दछन् सामग्री हेर्न। दर्शकलाई थाहा छ कि यो व्यावसायिक हो। तर जब तपाइँ विज्ञापनहरू हेर्नुपर्दछ, के तपाइँ सुख्खा स्थानीय कार डिलरशिप विज्ञापनमा हास्यास्पद GEICO स्थान मन पराउनुहुन्न?
यदि तपाइँको दर्शक व्यस्त छन् (र जसको होईन), तपाइँलाई तपाइँको भिडियो हेर्न समय खर्च गर्न कारण दिनुहोस्। यदि यसले तपाईको बिक्री पानाबाट बुलेट पोइन्टहरू मात्र रिशास गर्दछ भने, त्यसो भए बरु तिनीहरू स्किम गर्न सक्दछन्। एक कडा भिडियोले दर्शकहरूलाई यसमा उनीहरूको दिनको 90 ० सेकेन्ड बिताउने कारण दिन्छ।
एक कडा भिडियो एक हो जुन तपाईंको दर्शकलाई संलग्न गराउँछ, तिनीहरूलाई सोच्न लगाउँछ, र उनीहरूलाई थप मूल्य दिन्छ। यसले यस्तो चीज प्रदान गर्दछ जुन बिक्री पाना वा इन्फोग्राफिकबाट कटौती गर्न सकिदैन। तपाइँको B2B भिडियोहरू एक PowerPoint संग प्रतिस्थापन गर्न सक्षम हुनु हुँदैन।
उदाहरण: नुान्स - हामी, ग्राहकहरु
कर्पोरेट भिडियो एक राम्रो स्थान बाट बढेको। मध्यम माध्यमको रूपमा भिडियो अधिक पहुँचयोग्य भएपछि, निगमहरू यस प्रवृत्तिमा हाम फाल्न चाहन्थे। अब त्यो भिडियो आधुनिक मार्केटिंगको लागि आवश्यक हो, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले भिडियोहरू सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ जुन बिक्री बढ्छ र एक महत्त्वपूर्ण ROI ल्याउँछ। कर्पोरेट भिडियो तपाईंलाई त्यहाँ प्राप्त गर्दैन। एक स्पष्ट रणनीतिको साथ एक भिडियो, चतुर रचनात्मक, र यसले आफ्नो श्रोतालाई भर पर्न सक्छ भरोसा गर्दछ।
कर्पोरेट भिडियो जालबाट उम्कनका लागि थप सल्लाहहरूको लागि हाम्रो पूर्ण गाइड डाउनलोड गर्नुहोस्:
कर्पोरेट भिडियो बनाउनबाट जोगिने7तरिकाहरू
टैग: व्यापार भिडियोकर्पोरेट भिडियोकर्पोरेट भिडियो मार्केटिंगडेलोइटछायाumaultभिडियो मार्केटिंगभिडियो मार्केटिंग रणनीतिहरूभिडियो विपणन रणनीतिभिडियो रणनीतिव्यवसाय को लागी भिडियो
आशा छ कि मोर्ली को COO हो Umault, शिकागोमा आधारित B2B भिडियो मार्केटिंग एजेन्सी। उनी पोडकास्टको सह-होस्ट गर्दछि कर्पोरेट भिडियोको लागि मृत्यु, B2B भिडियोहरू बनाउनको लागि उपकरणहरू र सल्लाह प्रदान गर्ने एउटा शो।